Penny Auction Software | Harona fiantsenana - RapidAuctionSoft
The newest & most modern Penny Auction Software Solution Available Ask about our 14 maimaim-poana ny andro fitsarana
Plugins / fanavaozana
Vatolampy Solid Timers World Class Support
Tongasoa eto RapidAuctionSoft – Penny Auction and Ecommerce Software Solutions
Thank you for coming to RapidAuctionSoft sellers and designers of Penny Auction Software and the Best PHP Penny Auction Script misy
Anontanio momba ny 10% Price lalao fiantohana 1-603-557-1563
Izao isika afaka hanolotra mitete shipper integrations, mba hanolotra anao tanteraka turnkey asa!!!
Efa manana ariary lavanty tranonkala?
Ve ny rindrankajy mpivarotra hamela anareo ho sokafana?
No mifototra amin'ny teknolojia taloha?
Aza mailaka hiafara any amin'ny spam?
Moa tsy ny SEO miasa? Tsy finday namana?
Afaka mampiditra ny famolavolana sy afa-po eo amin'ny rafitra ambony be
New Update – Dia ahitana ny tsara kokoa zorony sary (isafidianana 3 fomba sy ny 8 loko, mavitrika teny rehetra izao teny manohana ihany koa), RSS, RSS + Atom fahana, Sitemaps for Auctions sy CMS afa-po sy ny maro hafa fiovana!!!
Tsy andrintsika ny miresaka momba ny Penny Auction Website hevitra aminao. Mpanjifa rehetra dia manana ny heviny manokana sy ny fomba amam-panao tsy tia manoratra Auction Code, na inona na inona dia ny sarotra ho antsika. Faly isika mahazo ny rehetra ny mpanjifa hevitra, Raha ny marina dia ny tsara indrindra ampahany amin'ny asa…dia tia mandray anjara amin'ny ny fientanentanana
Antsoy antsika amin'ny fotoana rehetra, Miasa amin'ny orinasa vahiny ny fotoana rehetra
Noho izany dia zava-dehibe momba ny e-varotra na Penny Auction Software raharaham-barotra?
Efa nanao ny fikarohana ka nandre ratsy hafa momba ny e-varotra hafa sehatra, ary voakasika momba ny mividy fanta-daza avy amin'ny loharano. Tsara ny manana indray. Maimaim-poana amin'ny fanavaozana ny fiantohana izay no tsara indrindra amin'ny raharaham-barotra sy ny fe-potoana lava indrindra fitsarana fa efa nahita. Andramo izany ho 14 andro vy very maimaim-poana amin'ny iray amin'ireo lohamilina…ary rehefa vonona ianao miisa ny ny lohamilina, na mifidy ny iray pof ny nampiantrano vahaolana
Mandritra ny fotoana voafetra isika toerana ho an'ny 3 beta fitiliana tranonkala….ireo 3 tranonkala izay miisa sy ny tompon'andraikitra fitsapana hahazo any rindrambaiko maimaim-poana ho an'ny fiainana…manavaka famolavolana fomba amam-panao na ny fandaharana. Alefaso mailaka momba ny beta fitiliana ny fampandrosoana ny ekipa
No ilainao ny Penny Auction Software Vahaolana, Penny Auction Script na Solutions E-Commerce Vahaolana
Best Penny Auction Software, Penny Auction Script Vahaolana Available
In 2018 dia nahatsikaritra fa maro mpivarotra Penny Auction Software sy E-commerce rindrambaiko nampiasa teknika sy ny kely lany andro raha tsy misy rafitra maoderina. Noho izany dia nanomboka nanoratra, dia nanoratra ny fehezan-dalàna hatramin'ny tany ka mampiasa CodeIgniter ho an'ny PHP. CodeIgniter dia ankehitriny Framework MVC (modely, View, -maso), izay mampisaraka lojika ho toerana ilaina izany, dia faran'izay mora ny mianatra, ary mampitombo ny, dia haingana kokoa noho miavaka PHP, azo antoka kokoa sy ho avy kokoa porofo.
Fa izay tsy ampy, nahatsapa koa isika fa ny antony mahatonga ny ankamaroan'ny PHP Penny ihany Auction Software lohamilina satria tsy dia miantehitra AJAX timers, mpanolo-tsaina sy ny hafatra. Noho izany rehetra izany nahatonga an'i Socket.io sy Node.JS. Izay midika fa ny lohamilina dia afaka mandefa hafatra mivantana ho any amin'ny mpanjifa tsy misy mila hatrany ny mpanjifa mangataka ny angon-drakitra vaovao. Raha ny marina ny timers manara-maso ny mpanolo-tsaina ao amin'ny 1000th ny faharoa. Izay midika fa ny mpanolo-tsaina dia haingana, milamina kokoa sy azo antoka kokoa noho ny hafa vahaolana. Aza manahy mikasika ny olona iray mitaraina momba ny very tamin'ny faharoa dia asao. Ny mpanolo-tsaina dia fantarina marina kokoa noho ny hafa toerana. Ara-bakiteny Afaka mahita ny fiovana bidder avo ao anatin'ny iray ihany, raha maro mpampiasa faharoa dia asao tamin'izany andro izany.
World kilasy Penny Auction Design
Farany dia tonga saina ny ankamaroan'ny mpanjifa dia mety mahazo aina kokoa noho ny fampiantranoana sy ny handoa fikojakojana eo amin'ny fandoavam-bola isam-bolana mora, ny azo antoka entana mandanjalanja lohamilina, nomen'ny iray amin'ireo tsara indrindra lohamilina orinasa eto an-tany! Noho izany dia mandray ny zava-drehetra ho anao. Raha outgrow iraisana lohamilina, Avy eo dia afaka ary hanosika anao manokana lohamilina raha tsy maintsy hisy. Fa ianareo kosa mbola manana ny soa rehetra ny dikan-maso rindrambaiko.
Mandritra ny fotoana voafetra ny mpanjifa vaovao rehetra mahazo maimaim-poana fametrahana, 5 ora ny fampiofanana sy 5 ora maimaim-poana famolavolana.
Tsy manolotra zavatra mihoatra noho ny Penny Auction Solutions
Manontany antsika momba ny lisitry ny hovidiana plugin.
Manohana koa ny fiteny vaovao
Vatolampy Solid timers, fantarina amin'ny thousandths ny faharoa. Ny fanaovana izany ny tena marina rafitra misy mpanolo-tsaina.
ANDRAMO TALOHAN'NY mividy. Free 2 herinandro ny fitsarana.
Current Clones ahitana
Orange manao veloma
Isika koa 25 Penny Auction Software lohahevitra izay azo ampiharina amin'ny rehetra ny vokatra, midika hoe mandinika Design lehibe kokoa noho ny Penny lavanty Software
Manontany antsika momba ny lavanty hafa karazana, manao be dia be mihoatra noho ny Penny Auction Software
Jereo ny velona demos Ao amin'ny fihetsiketsehana ny toerana!!!
Matetika fisoratana anarana alohan'ny fametrahana ny asao, ny mpampiasa dia takiana ny fisoratana anarana.
Login Ireo mpampiasa dia afaka leverage ny tombontsoa maro ny maha-mpikambana – miditra ny kaonty pejy, mametraka ny asao, hametraka vola ny kaonty sy ny maro hafa asa.
Purchase Sary nahazoan-/ Add fahaiza-mandanjalanja Ireo mpampiasa dia afaka mividy bola, ary hametraka fifandanjana ny kaonty na amin'ny alalan'ny fandoavam-bola vavahady, banky, na ny petra-bola mivantana alohan'ny fametrahana ny asao.
Place manao veloma Ireo mpampiasa dia afaka misafidy ny vokatra, ary mametraka ny asao. Ny mpampiasa dia afaka mametraka izay rehetra manao veloma araka izay tiany mandra-mandresy. Afaka mametraka ihany koa ny iray na dia asao na hamonjy ny dia asao ary mampiasa Bidbutler mba avy hatrany dia asaovy ho azy.
Bidbutler Bidbutler, koa niantso ny autobid na ny tompony dia asao, no toerana ny rafitra mametraka ny veloma voavonjy ho azy isaky ny folo segondra, na handefasana elanelam-potoana io ianao mamaritra.
SMS manao veloma Tsy voatery hisoratra anarana sy miditra ho SMS dia asao. Ny mpanolo-tsaina SMS fanazavana azo jerena ao amin'ny mifandray lavanty, ary azo napetraky ny mpandrindra ny tranonkala.
Live Ampandehano History Ireo mpampiasa dia afaka mahita ny asa sy ny mpanolo-tsaina avy amin'ny tantara dia asao fizarana ao anatin'ny vokatra antsipirihany pejy.
Mpandresy Ny mpandresy ny lavanty dia ny farany ny olona mba hametraka asao, rehefa tonga ny fotoana aotra segondra. Ny mpandresy mandoa ny farany izany noho ny lavanty zavatra (izay ho ambany noho ny tena vidiny).
Karazam-Auction Maro ny karazam-lavanty ao an-tsena; na izany aza, ny malaza indrindra dia tapaka karazana Auction, Raikitra Price Auction, Nilbitter Auction, Free Auction sy Rookie Auction.
CMS rafitra fitantanana ny votoaty (CMS), no toerana dia afaka mamorona hafa-milina fikarohana namana pejy noho ny lavanty toerana – toy ny About antsika, Mifandraisa aminay, politika Fiarovana fiainan'olona, Terms & Conditions, FAQ ny, Vonjeo, Ny fomba fiasan'izy sy ny sisa.
Current mpanolo-tsaina Auction List – Eto dia afaka mihevitra ny Current / Live Auction ny mpanolo-tsaina vaovao.
Won Auction List – Avy eto dia afaka mihevitra ny lisitry ny nahazo Auctions sy handoa ny sarany farany.
Ampandehano History Archive – Ireo mpampiasa dia afaka mijery ny tahiry avy eto dia asao.
Add Hita (Purchase Ampandehano Pack) – Ireo mpampiasa dia afaka hametraka fifandanjana mba hametraka ny asao avy amin'ity fizarana ity.
Fomba fandoavam-bola – Ireo mpampiasa dia afaka mifidy izay fomba fandoavam-bola, rehetra tena azo antoka, ary mandoa ny lavanty ny vidiny farany. PayPal dia ny toerana misy anao vavahady fandoavam-bola.
raharaham-barotra History – Ireo mpampiasa dia afaka mijery ny raharaham-barotra asa rehetra avy amin'ity fizarana ity.
afaho ny Code – Ireo mpampiasa dia afaka manavotra kaody tolotra manokana izay omen'ny ny Admin ho toy ny endriky ny toerana fampiroboroboana.
Jereo ny Friend – Ireo mpampiasa dia afaka hanondro ho namana maro araka izay tiany. Fa folaka avokoa ny anarana dia afaka ihany koa mandray tombony nahazoan-dalana napetraky ny Admin.
Hanova tenimiafina – Ireo mpampiasa dia afaka hanova ny tenimiafina avy eto kaonty.
Closed Account – Ireo mpampiasa dia afaka hanakimpy ny tantara, ary tsy afaka hanokatra ny kaonty amin'ny adiresy mailaka ihany indray.
Newsletter Setting – Ireo mpampiasa dia afaka mankarary na manampy na famandrihana ny gazety safidy avy amin'ity fizarana ity.
Raiso amin ny Newsletter mpitsidika dia afaka sonia ho an'ny lavanty gazety handray fampahatsiahivana, fanavaozam-baovao sy ny tolotra.
Category Management Ny Admin dia afaka mitantana (hametraka, hanova na mamafa) sokajy sy ny fikarohana ho an'ny sokajy na amin'ny anarany, na ID.
Auctions Management Admin no mahay manampy, manova na mamafa Auctions sy mitady azy ireo amin'ny anarany, sata, karazana sy ID. Ny Admin dia afaka ihany koa ny maka tahaka ny lavanty ihany koa ny mijery ny mpanolo-tsaina ao aminy tantara sy ny tsipiriany hafa.
Auctions Report / Delivery Admin afaka mahita ny tatitra ny nandresy lavanty na ny antsipiriany ny mpandresy. Ny Admin afaka manova ny lavanty ny toerana mbola miandry ny fanaterana avy amin'ity fizarana ity.
Ny fametrahana vohikala The Admin afaka manova ny toe-javatra toerana avy amin'ity fizarana ity.
Member Management Ny Admin na afaka manampy, hanova na mpampiasa hamafa na tadiavo ao ny toe-, Anarana sy ID. Ny Admin mpampiasa koa dia afaka mahita 'mpanolo-tsaina & raharaham-barotra tantara.
Ny fametrahana ny Admin Email afaka misafidy ny toerana mailaka avy amin'ity fizarana ity – mampihetsika ny mailaka, Nanadino tenimiafina sns.
Mpandresy Management The Admin dia afaka nametraka ny mpandresy lisitry ny sary, adiresy, ary ny valiny.
Site Statistics ny Admin Afaka mijery ny tranonkala ny tatitra sy ny fanondranana ny tatitra in CSV endrika.
Time Zone Ny fametrahana The Admin dia afaka hametraka ny firenena Fiozao ara-potoana fametrahana avy amin'ity fizarana ity.
Time The Admin afaka manova ny tolotra sy tombontsoa manokana mba hampiroboroboana ny namany Sary. Bonus Laharana dia hanana ny fotoana voafetra.
Bonus ny fampifantohana ny Admin afaka manova ny SIGNUP sy ny anarana tombontsoa.
Ampandehano Pack Management The Admin afaka manova ny hafa dia asao Packs bola maimaim-poana miaraka amin'ny. Ny Admin no mahay manampy, hanova na hamafa Ampandehano tsirairay Pack.
Help / FAQ Management Nampisy ny fanampiana sy ny FAQ pejy niaraka tamin'ny famaritana.
IP Block dia afaka hanakana ny Admin misy IP ho an'ny tranonkala bebe kokoa ny fidirana.
Hanova Password Ny Admin afaka manova ny tenimiafina avy eto kaonty.
Relist fiara sy ny fiara lisitra Auctions
Login amin'ny Facebook na Twitter
maro addons / Plugins sy ny endri-javatra optiona
Voasoratra ao amin'ny rafitra ankehitriny midika fa milamina sy mialoha
New Dropship Adaona manana fanohanana ny Doba sy MegaGoods, more dropshippers mba hanampy nandritra ny andro vitsivitsy manaraka. Mitsangàna, ka nihazakazaka tamin'ny fivarotana amin'ny vitsivitsy kitika tsotra
Mampiditra theming ho an'ny 20+ iombonana, Sub môdely combos…ary efa ho 30 lohahevitra sy ny fitomboan'ny…dia afaka mamorona izao ny 500+ teti-dratsy tsy manam-paharoa tanteraka. maro no mifototra amin'ny fety
Mavitrika Language Support, aoka ny toerana hahatratra olona maro kokoa
New Adaona for Penny Auctions, Miantsena sy ny fehezan-pos…auto translate content from the admins default language to all languages they have enabled in their program (pos, miantsena na Auctions…Ebay Auctions avy amin'ny faran'ny taona BTW). Izany Adaona miasa ho an'ny vokatra sy ny Meta Tags fotoana izao, fa mitaky kaonty Google noho ny fandikan-teny API. […]